डा. रेणुका सोलु
डा. रेणुका सोलु6लेखहरु0comments
अनुभूति : आमाको शृङ्गार
डा. रेणुका सोलु	 ६ आश्विन २०७८ १४:३१ 0
अलि अगाडि आमाका केही तस्बिरहरू फेसबुकको भित्तामा पोस्ट गरेँ । तस्बिर नियाल्नेहरू केहीले कल गरेर यति धेरै आँत्तिएको स्वरमा भने कि "होइन आमा निकै बिरामी कुनुहुन्छ कि क्याहो नानी?" "हजुर अलि बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि खाइरहनुभा’छ ।…
डा. रेणुका सोलु	 १६ भाद्र २०७८ १९:०१ 0
एकदिन कार्यालयको खाजा समयमा क्यान्टिनमा बसेर खाजा खाने तयारीमा थियौँ । एक जना सहकर्मी मित्र खाजा पर्खिने क्रममा मोबाइल चलाइरहेकी थिइन् । एकैछिनमा ती मित्र चिटचिट पसिना निकाल्न थालिन्, उठ्दैबस्दै गर्न थालिन् । कतिखेर हातबाट मोबाइल नै…
जन्मगाउँ कि माइतीगाउँ ?
डा. रेणुका सोलु	 ९ भाद्र २०७८ ०६:०१ 0
बिहेपश्चात् निकै लामो समय जन्मथलो पुग्न सकिनँ । कारण कार्यव्यस्तता एवम् जन्मदिने आमाबुबा तराई झरिसक्नुभएको हुनाले या समय व्यवस्थापन गर्न नजानेर पनि हुन सक्छ यतै सहरको भिडमा अलमलिरहेकी थिएँ अथवा भनौँ जन्मघर पुग्न सकेकी थिइनँ । कौतुहल…
अनुभूति : समानताको पर्दा
डा. रेणुका सोलु	 २ भाद्र २०७८ १६:०१ 0
अलि अस्ति छोरीको फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखिएको थियो, "मेरो घरमा म महिनावारी हुँदा बार्नु पर्दैन, यो सामान्य कुरा हो तर यही बार्नु नपरेकै कारण म आफूलाई संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी सम्झन बाध्य छु ।" छोरीको भाग्यप्रतिको दृष्टिकोणले मेरो…
शक्ति आत्मचेतनामा छ कि गहनामा ?
डा. रेणुका सोलु	 २७ श्रावण २०७८ १६:०१ 0
बर्सैपिच्छे जब साउन लाग्छ तब हरिया, पहेँला, राता त्यो पनि महिलासँग जोडिएका सौभाग्यका रङ्गहरूका बारेमा तर्कवितर्क सुरु हुन्छ । एक थरी मान्छेहरू आभूषण र मेकअपले महिलालाई सुन्दर देखिन्छ अनि सुन्दरताले आत्मबल बलियो बनाउँछ भन्ने तर्क…
आइमाईले भुँडी छोप्ने कि देखाउने ?
डा. रेणुका सोलु	 २० श्रावण २०७८ ०८:०१ 0
विगत लामो समय ट्रेडयुनियनमा आबद्ध भएर पेसागत हक, हित, अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा काम गर्ने अवसर पाएँ । केही समय भयो पदीय आचारसंहिताले यस्ता भूमिकामा सक्रिय सहभागिता जनाउन असमर्थ रहेकी छु । पेसागत विषयमा बहस पैरवीका क्रममा…
सती जाने शक्ति
डा. रेणुका सोलु	 १३ श्रावण २०७८ ०८:०१ 0
सानो हुँदा गाउँमा कसैको बिहे हुँदैछ भनेपछि रमिता हेर्न जानेको ताँती हुन्थ्यो । त्यो ताँतीभित्रको एउटा रमिते पात्र म पनि हुन्थेँ । विवाहको जग्गेमा बेहुलाले बेहुलीलाई लगाइदिएको पोतेको भारी र सिन्दुरको लर्को देखेर म…
कुलो लाग्ने खेत होइन, मलाई बुबा चाहिएको थियो
डा. रेणुका सोलु	 ३० असार २०७८ १२:०१ 0
अनेकौँ आरोहअवरोह सामना गर्दै भए पनि बुबाको अप्रेसन सफल भयो । उहाँको पिसाबथैलीमा जम्मा भएको एक मुट्ठी पत्थर एउटा सिसाको भाँडोमा राखेर डाक्टरहरूले मलाई देखाउनु भयो । अब बुबाको पेटबाट रोगको पोको सिसाको भाँडोमा सर्‍यो, म कति खुसी भएँ ?…
डा. रेणुका सोलु	 २३ असार २०७८ ०६:०१ 0
उपचारका लागि काठमाडौँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रहअनुसार चैत्र दोस्रो हप्ता बुबा काठमाडौँ आइपुग्नुभयो । अब पिसाब रोकिएको रोगसम्बन्धीका डा. अलि विज्ञ छन् भनेर सोधीखोजी गर्दा डा. अर्जुनदेव भट्टको कुरा आयो । पहिला रोग पत्ता लगाऔँ अनि उपचारमा…
लामाजुराको जङ्गलमा दुई यात्री
डा. रेणुका सोलु	 १६ असार २०७८ १५:०१ 0
उच्च शिक्षा र रोजीरोटीको खोजीमा सहर पसेकी म बिहानी कक्षा पद्मकन्या क्याम्पसमा पढेर दिउँसो ठमेल ट्राभल एजेन्सिमा काम गर्दै थिएँ । अफिसमा नै रहँदा आ.वा. आइपुग्यो । "घरमा बुबा निरञ्जन भएर सिकिस्त हुनुहुन्छ, मुख हेर्ने भए आउनू" आ.वा. मा…